Kwidolophu yasePella Klokkenspel Studio
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguJason
Indawo, indawo, indawo! I-Pella intle kakhulu! Kanye kumnyango weKlokkenspel, iingcango ezi-2 ezantsi ukusuka kwi-Cellar Peanut Pub, isiqingatha sebhloko ukuya kwi-windmill yase-Vermeer kunye ne-Pella Historical Village kwaye ekunene phezu kwe-Dutchfix yokutyela! Zininzi izinto onokuzenza kwaye uzibone zonke kumgama wokuhamba.
Imigangatho yoqobo yomthi oqinileyo, iiplanga eziveziweyo, kunye neendonga zezitena zibonelela ngomtsalane okhethekileyo ongazuwufumana kwenye indawo
IDowntown Pella iye yafumana uhlengahlengiso olumangalisayo lwezakhiwo zayo eziyimbali edolophini kwaye iivenkile ezininzi ezintsha ziye zavula iingcango zazo. Iindawo zokutyela, iivenkile zekofu, iivenkile zokubhaka, ivenkile, itshokolethi, ivenkile, ivenkile yewayini kunye nokunye okuninzi ngaphakathi kwamanyathelo angama-621 Franklin.
UValerie noJason basebenza ngeDutchfix indawo yokutyela engaphantsi kwendawo kwaye baya kufumaneka ngefowuni kunye/okanye ngokobuqu ngexesha lokuhlala kwakho.